Huteel Albaabka Laga Galaa Faransiiska Ku Yaallo Ka laga Baxaana Switzerland – Tusmoonline.com
Huteel Albaabka Laga Galaa Faransiiska Ku Yaallo Ka laga Baxaana Switzerland
Dhacdooyinka Wararka	December 20, 2016	115	Like
Waxa laga yaabaa in aad aad ula yaabtay ciwaankan oo aad is tidhi sidee ayay suurta gal u tahay in aan Huteel albaabkiisa ka galo aniga oo wadanka Faransiiska jooga kadibna albaabka kale ka baxo oo aan sidaa ku joogo wadan kale ee qaaradda Yurub isna ku yaalla ee Switzerland. Waa dhacdo dhab ah.
Huteel ku yaalla xuduudda kala qaybisa dalka Faransiiska iyo Switzerland ayaa noqday mid si weyn u soo jiitay dalxiisayaasha ka yimaadda dalalka adduunka ee labadan dal soo booqda.
Waxa uu Huteelkani halkaasi ku yaallay muddo qarniyo ah imikaase maal gelin lagu sameeyey oo uu noqday Huteel caan ah oo isku xidha laba dal oo waaweyn. Huteelkani waxa uu ku yaallaa saawiyadda iyo halka iska galaan xuduudda dalalka France iyo Switzerland.
Albaabka laga galo waxa uu ku yaalaa dhinaca Faransiiska, albaabka dambe oo loogu tala galay in ay dadku ka baxaana waxa uu xigaa dhinaca Switzerland. Sababtan ayaa soo jiidatay dalxiisayaal badan oo huteelkan yimaad. Labada calan ayaa kala sudhan labada albaab.
July 8, 2018	36	Like
March 15, 2018	353	1
February 26, 2018	589	1
February 24, 2018	580	1
December 24, 2017	1010	2
January 15, 2017	1036	2
January 8, 2017	549	2
January 4, 2017	6075	Like
January 4, 2017	633	3
January 3, 2017	1201	2